Tari-dalana Toriteny Alahady 02 oktobra 2016 (Alahady faha-19 manaraka ny Alahadin’ny Trinité) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 02 oktobra 2016 (Alahady faha-19 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro ary atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana amintsika manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha-02 Oktobra ho avy izao. Mirary soa indrindra tompoko.
“Matokia anaka, voavela ny helokao”
Teny fandrentsika matetika ao am-piangonana avy amin’ny vavan’ny Pastora izay mitarika ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika isaky ny Alahady maraina izany. Antsointsika hoe “absolution” faobe ho an’ny Kristiana rehetra izay manatrika ny fanompoam-pivavahana izany. Araka izay ahitantsika azy eto amin’ny texte dia olona mararin’ny paralysisa (paralysé) na olona malemy no nentin’ny havany tamim-pinoana teo amin’i Jesosy mba ho sitraniny. Kanefa dia ity teny ity hoe “matokia/mifalia anaka, voavela ny helokao” ity no nivoaka ny vavan’i Jesosy ary sitrana ilay olona. Ny hoe “voavela ny helokao” dia dikan’ny matoanteny ἀφέωνταί (indicative perfect passive-n’ny ἀφίημι: mamela heloka, manafaka na mamela olona iray hiala teo anatrehan’ny hery na fahefana izay nangeja azy). Araka io tenin’i Jesosy io dia azo ambara fa mifamatotra ny aretina sy ny ota/heloka kanefa ny ota/heloka no fototra sady olana kokoa, mifamatotra araka izany koa ny famelankeloka sy ny fahasitranana. Ahoana ny hanazavana izany?
Ny aretina dia tsy hafa fa fahafatesana mby an-koditra. Ny fahafatesana kosa dia tambin’ny ota, NA noho ny ota izay tafiditra teto amin’izao tontolo izao dia tafiditra ho tambin’izany koa ny fahafatesana ary mahatratra ny olombelona rehetra izany satria samy ao anatin’izany tontolon’ny ota izany avokoa izy rehetra, hoy Paoly Apostoly (Rom 5:12; ampit. Gen 3:16–19). Tsy porofon’ny maha mpanota ny olona iray mihoatra noho ny hafa izay toa salama araka izany ny aretina izay mahazo azy, tsy porofon’ny fikapohan’Andriamanitra azy manokana noho ny helony, fa porofon’ny maha ao anatin’ny fanjakan’ny ota sy ny fahafatesana izay tambiny azy kosa (ampit. Jaona 9:1–5). Ny Olombelona rehetra, izay mety maty, dia samy ao anatin’izany fanjakan’ny OTA izany avokoa: mahatratra ny olona iray sy ny olona rehetra araka izany ny aretina noho izy ao anatin’ny tontolon’ny fahalovana sy ny fahafatesana noho ny fidiran’ny ota teto amin’izao tontolo izao izany (Gen 2:17; 3:16–19). Ny aretina koa anefa dia nolazain’i Jesosy fa ho fanehoana ny Voninahitr’Andriamanitra (cf. Jaona 9:3): i.e., ho fampiharihariana ny asan’Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka tao anatin’izany fanjakan’ny Ota sy ny fahafatesana izay tambiny izany. Fanafahana ity mararin’ny Paralysisa ity tao anatin’izany fanjakan’ny Ota sy fahafatesana izay tambiny izany no nataon’i Jesosy eto: Izay no famaritana ny FAMELANKELOKA araka ity texte izay anjarantsika ity.
Raha mifamatotra ny ota sy ny aretina, kanefa raha fototra sady olana kokoa ny ota dia tsy izay marary ihany no mila ihany ny tenin’i Jesosy hoe “matokia anaka, voavela ny helokao” fa isika rehetra izay toa salama kanefa ao anatin’ny tontolon’ny OTA koa. Izany no anononana ity tenim-pamelankeloka ity amintsika rehetra tsy an-kanavaka amin’ny fotoan’ny absolution faobe amin’ny fotoam-pivavahana amin’ny Alahady maraina. Izay salama ka mihevi-tena fa tsy manana ota dia mamita tena (ampit. 1 Jao 1:8) ary tsy mahazo ny vokatsoan’izany tenim-pamelankeloka avy amin’i Jesosy izany.
Passive ny matoanteny hoe ἀφέωνταί eto, i.e., Jesosy no mpanao ny asa fa iharana ihany ity marary ity. Ireo texte samihafa izay efa notoriana tamintsika nandritry ireo Alahady telo teo aloha dia nilaza tamintsika fa tsy haintsika zanak’olombelona ny mandresy ny fahafatesana tsy hahatratra ny aintsika, tsy haintsika, ilay zavaboahary simba noho ny fidiran’ny ota ny manadio ny tenantsika ho afaka amin’izany ota izany mba tsy hahatraran’ny fahafatesana izay tambiny tsy hahatratra antsika. Asan’Andriamanitra irery izany. Fantatry ny Jiosy tsara izany. Maneho ny maha Andriamanitra an’i Jesosy koa izany ny teniny eto hoe “voavela ny helokao”.
Sambatra izay mandre sy mino ny tenim-pamelankeloka avy amin’i vavan’i Jesosy, Ilay “YHWH no Mpamonjy” fa izy no ho afaka tao anaty fanjakan’ny OTA sy ny fahafatesana izay tambiny. Sambatra izay miombona amin’i Jesosy sy ny hazofijaliany izay nandevonany tanteraka izany ota izany tao amin’ny fahafatesany ary nandreseny tanteraka ny fahafatesana izay tambin’izany ota izany tao amin’ny fitsanganany tamin’ny maty. Ry Havana, ny maharitra miombona Aminy amin’izany no tena “voavela heloka” ary hiombom-piainana Aminy mandrakizay. Aoka ho isan’izany koa ianao! Amena.